Deep uzo Ball biarin - Shandong QILU Industrial & Trading Co., Ltd.
E wezụga na-akpụ akpụ ngwaahịa, Qilu na-pụrụ iche na-emebe na n'ichepụta a dịgasị iche iche nke nkenke, top mma miri uzo bọl biarin nke 60 usoro na 62 usoro na obi ụtọ nha nke 3.969 mm na 4.763 mm, nke na-ọtụtụ-eji maka akwa, electric Motors, obigbọ ala, ngwa ụlọ, ngwa ọrụ ike, pọmpụ, ọgba tum tum, ụgbọ ala dị arọ, ihe ụmụaka ji egwuri egwu wdg.
Site na mgbaaka, ngịga, bọọlụ nchara ka abụba, Qilu na-ahọrọ ngwaahịa kachasị mma na usoro ọ bụla iji hụ na ndị ahịa nwere ike iji ya dị jụụ.
Qilu agba mgbanaka na bọl bụ agụụ degassing elu ịdị ọcha elu carbon chromium agba ígwè GCr15, na zuru ike ọgwụgwọ site okpomọkụ ọgwụgwọ ọkụ, nke a ana achi achi quenching ekweghị ekwe, na-ekwusi ya magburu onwe ibu na-eguzogide, anwụ ngwa ngwa na mkpọtụ e ji mara.
Chemical mejupụtara nke GCr15 ihe:
A na-emepụta oghere dị mma site na mpempe akwụkwọ carbon carbon dị ala.
Anyị na- eji mpempe akwụkwọ electrolytic na-ebelata oyi maka nke a gbanwere, nke na-adịghị egbu egbu na njirimara dị mma na nhazi stampụ na mgbochi mmebi ahụ, Ọta na-arụ ọrụ dị mma na mgbochi ntụ, mkpuchi mmanụ na mkpuchi mmiri na mmiri.
Ihe mkpuchi akara Rubber
Akara akụrụngwa bụ nitrile roba, nke bụ copolymer nke acrylonitrile-butadiene.It bụ ihe a na-ejikarị emechi ihe akara dị ka arụmọrụ ya dị mma na nguzogide mmanụ, na-agbanwe agbanwe, nkwụsị abrasion, ike igwe wdg.